जान्न चाहनुहुन्छ ? लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको वास्तविकता – News Portal of Global Nepali
जान्न चाहनुहुन्छ ? लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको वास्तविकता
सीतापुल दोभान : दार्चुला जिल्लाको छाङरुस्थित नेपालभारत सीमा क्षेत्रका सीतापुल दोभान । उक्त स्थानमा बायाँबाट आएको तिङकर नदी र दायाँबाट आएको काली नदी मिसिएको हो । देखिएको तस्वीरको बायाँ भाग नेपाल हो भने दायाँ भाग भारत हो । भारतीय भूमिका देखिएको सडक गुञ्जी, कालापानी हुँदै चीनको मानसरोबर जान लिपुभञ्याङसम्म भारतले हालै बनाएको सडकसँग जोडिन्छ । यसको १० किमीमाथि भारतले अतिक्रमण गरेको भूभाग गुञ्जी दोभान भेटिन्छ । तस्वीर : नारायण ढुङगाना